Fitantanam-pitondrana · Mey, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Mey, 2021
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Mey, 2021
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Mey 2021
Azia Atsimo 18 Mey 2021
Azia Atsinanana 17 Mey 2021
"Nosamborina ireo tanora ireo satria niezaka niaro ny farihy lehibe indrindra eto Phnom Penh sy hitahiry azy ho an'ireo andiantaranaka ankehitriny sy hoavy."
Azia Atsinanana 16 Mey 2021
Tokony hihevitra ny vehivavy fa "ny tolona ataontsika dia tsy hanoherana fotsiny ny jadona...fa koa tolona iray hanafahantsika ny tenantsika hiala amin'ireo teritery ara-potokevitra ananantsika, hiala amin'ireo fitsaratsaram-poana izay isika ihany no mametraka azy ho antsika."
Amerika Latina 14 Mey 2021
Taorian'ireo andiana fihoaram-pefy, takian'ny vahoaka ny hisian'ny fanaovaozana. Afaka hiala amin'ny kolontsaina efa nifàka lalina nakàny tàhaka ny fomban'ny miaramila ve ny pôlisy ao Amerika Latina?
Azia Afovoany sy Kaokazy 12 Mey 2021
Nolanian'ny Mpikambana Parlemantera Zeorziana ny fanitsiana izay mametraka onitra mafimafy kokoa sy fotoana lavalava kokoa ifonjana mialoha ny fotoam-pitsarana amin'ny fandikan-dalàna fampiasan'ny polisy rehefa misambotra mpanao fihetsiketsehana an-dalambe.
Azia Atsinanana 09 Mey 2021
Azia Atsimo 03 Mey 2021